Ingeniso yokhenketho yowama-2021 engaphantsi kwesiqingatha samanqanaba obhubhane wangaphambili
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Ingeniso yokhenketho yowama-2021 engaphantsi kwesiqingatha samanqanaba obhubhane wangaphambili
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Caribbean • Ukubambisa • inkcubeko • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zeMpilo • Icandelo lokungenisa izihambi • Iihotele kunye neeholide • Iindaba zeLuxury • iintlanganiso • iindaba • Ukuhamba ngololiwe • Ukwakha kwakhona • Resorts • Xanduva • Shopping • Tourism • uthutho • Iindaba zeWired Travel • Iindaba ezahlukeneyo
Ingeniso yokuhamba nokhenketho lwehlabathi kuqikelelwa ukuba ifikelele kwi-385 yezigidigidi kuphela ngonyaka ngo-2021, ngaphantsi kwesiqingatha samanqanaba e-pre-COVID-19.
Ubhubhane we-COVID-19 ubangele eyona ntengiso inkulu kwimbali.
Imithetho yokutshixa ukuthintela ukusasazeka kwintsholongwane, kukhokelele kumawaka eeholide ezingarhoxiswayo, kunye neehotele ezivaliweyo.
Ilahleko iyonke yohambo nokhenketho kulindeleke ukuba ibonakale kulo nyaka inkulu.
Amazwe kwihlabathi jikelele aqalisile ukulungiselela ihlobo lowama-2021 ekuqaleni konyaka ukuvuselela uhambo oluya kwindawo yabo kunye nokwenza ukuba abakhenkethi batyelele ngokukhuselekileyo.
Ukutshixwa ngokupheleleyo kwiinyanga zokuqala zika-2021, ukwanda kovavanyo, kunye nokuvalwa ngokupheleleyo kokungafuneki, ngakumbi okuvela kumazwe aneenguqulelo zentsholongwane, zonke ezi ziyinxalenye yale mizamo. Nangona kunjalo, kwakungonelanga ukuyeka ukunyuka kweelahleko ezibangelwa yimpembelelo yesibetho ngqo kukhenketho nakwamanye amacandelo asondelelene nawo.
Ngokwedatha yomzi mveliso wamva nje, ingeniso yokuhamba kunye nokhenketho kwihlabathi liphela ifikelela kwi-385 yezigidigidi kuphela ngonyaka ngo-2021, ngaphantsi kwesiqingatha samanqanaba e-COVID-19 angaphambi kwesiqingatha.
Ukushishina ngenqanawa yokuHamba ngenqanawa kunye neHotele eyona nto ibiQhelekileyo, iiRhafu eziDibeneyo ezihlawulwe yi- $ 258 zigidi
I-COVID-19 ibangele eyona ntengiso inkulu kwimbali, njengoko amazwe kwihlabathi lonke ebeke imithetho yokutshixa ukuthintela ukusasazeka kwintsholongwane, ekhokelela kumawaka eeholide ezingarhoxiswayo, kunye neehotele ezivaliweyo. Nangona uninzi lwazo luye lwasusa izithintelo zokuhamba lwaza lwaphinda lwavulwa ngexesha lehlobo lowe-2021, ilahleko iyonke yengeniso kule marike kulindeleke ukuba ibonakale kulo nyaka iseyimbalasane.
Kwi-2020, ingeniso yecandelo liphela yehle phantse nge-60% YoY ukuya kwi- $ 298.5 yezigidigidi, ityhile idatha yamva nje. Nangona eli nani kulindeleke ukuba likhule phantse ngama-30% ukuya kwi-385.8 yezigidigidi ngo-2021, isengama-351 ezigidi zeerandi ngaphantsi kunaphambi kokuba ubhubhane uhlasele.
The ishishini lokuhamba ngenqanawa lihlala lelona candelo lithe xhaxhe kwintengiso yezokhenketho kwihlabathi liphela. Ngo-2021, ingeniso yeenqanawa zehlabathi isetelwe ukufikelela kwi-6.6 yezigidigidi kuphela, okanye i-76% ngaphantsi kwe-2019. Umzi mveliso wehotele ulandela nge- $ 132.3 yezigidigidi kwingeniso kwaye i-64% yehle kwiminyaka emibini. Nangona izigidi zabakhenkethi zigqibe kwelokuba ziye eholideyini kwisizini ka-2021, amanani abonisa ukuba ingeniso edityanisiweyo yala macandelo mabini iza kuhlala i-258 yezigidigidi zeerandi ngaphantsi kwamanqanaba angaphambi kobhubhane.